Ole Gunnar Solskjær oo sheegay in Bruno Fernandes uu noqon doono mid ka mid ah halyeeyadii ugu fiicnaa ee soo martay Man United – Gool FM
Haaruun February 23, 2020
(Manchester) 23 Feb 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay in Bruno Fernandes laga yaabo inuu noqdo Paul Scholes cusub ee Red Devils.
Bruno Fernandes oo 25 jir ah ayaa yimid kooxda Manchester United suuqa bishii Janaayo ee la soo dhaafay, wuxuuna kaga soo biiray naadiga Sporting Lisbon ee dalka Portugal adduun dhan 46.6 milyan ginni.
Illaa iyo haatan Bruno Fernandez wuxuu u ciyaaray kooxdiisa cusub ee Manchester United, seddex kulan, wuxuuna caawiyay hal gool.
Haddaba shabakada caalamiga ah ee “Goal” ayaa waxay shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay macalinka Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Bruno Fernandes wuxuu i xasuusinayaa Paul Scholes ciyaaryahan ahaan, laakiin shaqsi ahaan waxay ku kala duwan yihiin garoonka dhexdiisa”.
“Kulankii Club Bruges, markii uu fadhiyey kursiga keydka, waa uu wareegayay wuxuuna la hadlayay wuxuuna la hadlayay ciyaartoydii ciyaareysay, wuuna caawinayay”.
“Waa hogaamiye iyo shaqsi raadiya guusha, ilaa haatan muusan muujin awoodiisa oo dhan, laakiin wuxuu ku guuleystay inaan ku qanco, waa ciyaaryahan heer sare ah, waan ku faraxsanahay inaan la soo saxiixano”.